Ogaden News Agency (ONA) – Wargaysyada ka soo baxa dalka Ingriiska maxay ka qoreen Filimkii BBC Newsnight-ka
Wargaysyada ka soo baxa dalka Ingriiska maxay ka qoreen Filimkii BBC Newsnight-ka
Posted by ONA Admin	/ August 7, 2011
Wargeysyada caalamku gaar ahaan kuwa ka soo baxa dalka Ingriiska ayaa aad uga wax uga qorey filimkii ay BBC-du ka soo diyaarisay deeqda lasiiyo dadka Ethiopia iyo sida ay xukuumadda KT Meles Zinawi u maamusho deeqdaas iyaga oo u adeegsada hub ahaan ay kula dagalaan shacabka masaakinta ah een isdifaaci karin. hadaba arintan oo caalamka oo dhan hadalhayo ayaa si gaar ahaaneyd u soo qaadaneyna wargeysyada kaso baxa wadanka UK kuwa ugu waaweyn sida ay u arkeen uguna gudbiyeen shacabka Ingiriiska.
Wargeysyada Wadanka UK oo ay ugu horeeyaan The Guardian, Telegraph iyo Daily mail ayaa waxa ay aad uga faaloonayaan Deeqaha Dowlada Ethiopia uga yimaada Wadamada Deeqda bixiya iyaga oo daba socda warbixintii waafiga aheyd ee BBC Newsnight lagu soo bandhigay.
Wargeyska Guaridan ayaa cadadkiisii shalayto (5/7/2011) kusoo saarey faalo dheer oo uu uga waramayo baadhitaanka ay wada jirka u sameyeen “BBC News night” iyo “Bereaue of investigative Journalism”. wargeyska ayaa waxa uu qoray in labada shirkadood ay siwada jir ah ugu heshiiyeen jaamacada London City Universal iyaga oo ku heshiiyay inay si qarsoodi ah ku tagaan wadanka Ethiopia islamarkaasna ay soo duubaan dadka lagu dhibbaateeyo lacagaha deeqda Macaawimada lasiiyo Ethiopia. Suxifiyiinta ayaa u dhoofay Caasimada Addis ababa iyo Gobolo kale oo ka tirsan Ethiopia iyaga oo iska dhigaya dad dalxiisaya. Mudadii ay ku sugnaayeen ethiopia waxa ay si qarsoodi ah u soo wareysteen Beeralay iyaga oo beeralaydu ay u sheegeen inaysan heysan waxii la beeri lahaa iyo waxyaalaha beerta loo isticmaalo ee bacarminta (fertilizers). Waxa kale oo ay la kulmeen oo ay soo xaqiijiyeen in dadka la jidh dilo iyada oo lagu aaneynayo fikrada ay aminsanyihiin ama xisbiga siyaasiga ah (mucaaradka) ay ka tirsanyihiin awgeed. Waxaana ay la kulmeen dad la ciqaabay oo geed laga soo laaladiyay si foorar ah, islamarkaasna biyo loogaliyay luqunta si loogu ciqaabo iyada oo koronto lagu dhajinayo jidhkooda waxaa kale oo ay la kulmeen dad laga saaray xiniinta iyo jaaliyado dhan oo loo diiday cunnadi gaajona lagu xakameeyay.
Waxa kale oo wargeysku ka waramay dadka kasoo jeeda Somalida Ogadeniya ee ay bbc news night kula kulmeen xeryaha qaxootiga kenya, iyaga oo Dhadhaab ku wareystay haween badan oo lasoo jidh dilay loona geystay kufsi. Waxa si qotto dheer wargeysku u qoray Ayeeyo 4 ilmood heysa oo ka warantay sida loogu hordilay wiilkeda dabadeetana ay iyada jeel ay ugu qaffaalleen mudoo hal sano iyo badh ah iyada oo waxba galabsan halkaasna ay si isdaba joog ah ay ugu kufsadeen. Waxaa kale oo wargeysku qoray gabadh kale oo ku sugan xeryaha qaxootiga oo iyana ciidamada Ethiopia ay caloosha kaga tunteen iyada oo leh 8 billood oo uur ah, halkaasna uu ilmahi uga soo dhacay,
wargeyska Guaridan oo sheekoyinkan ka hadlaya ayaa waxa kale oo uu soo qaatay warbixinta Haayada Xuquuql insaanka ee human Rights Watch oo hada ka hor ku eedaysay Dowlada Ethiopia inay u adeegsato lacagaha deeqda ah ee wadamada ree galbeedka uga yimaado inay u adeegsato danaheeda khaaska ah iyada oo ku ciqaabta dhamaanba dadka ka soo horjeeda dowlada. Waxa ay ilmaha ciyaalo iskoolka, iyo shaqalaha dowladaba ay siisa lacagahaas si ay u qaataan mabda’a TPLF cidii kasoo horjeedsadana waa ay ku ciqaabta.
Wargeyska ayaa waxa uu sheegay in wadamada deeqda bixiya ay Dowlada Ethiopia siiyeen sanadkii 2009 lacag gaareysa 3.9 billion oo dollar lacagtaas oo sanad kasta la siiyo. wadama sida aadka ah ugu jajabn dowlada ethiopia waxaa kamid ah dowlada Mareykanka, Ingiriiska iyo Germanka. Dowlada Ingiriiska oo deeq gaareysa siisay 214 Million oo Pound sanadkii 2009 islamarkaasna u balan qaaday Inay sii kordhin doonto deeqda ay siiso Ethioia ayaa waxa ka hadlay Wasiirka deeqaha u qaabilsan wadanka Ingiriiska Stephen O’Brian waxuuna sheegay lacagta deeqda ah ee wadanka Ingiriisku siiyo Ethiuopia inay caawiso dad gaaraya 30 million oo Itobiyaan ah. Waxaan balan qaadayna in baadhitaan cad lasameyn doono islamarkaasna aan xaqiijin doono in canshuur bixiyaasha UK lacagtoodu gaadhi doonto meeshi iyo cidii loogu talo galay.
Wargeyska Daily Mail ayaa isna cadadkiisa shalayto kaga warbixiyay sida Dowlada Etiopia ulunsato lacagta deeqda ah ee dadka shaqeeya UK looga soo jaro ama dawarsado. Waxa wargeysku aad uga hadlay lacagta sida bilaashka ah lagu siiyo dowlada Etiopia ee lagu daba galin. Dowlada Ethiopia ee Raisal wasaaraha ka yahay Melez Zenawi waxa uu ka xanibay daabiyado dhan cunnadii deeqda aheyd ee boqolaalka million wadamada deeqda bixiyaa ku deeqaan, wadankan UK ayaa kamid ah wadamada ku bixiya 290 million sanadkasta in lagu quudiyo dadkaas ay dowlada Ethiopia ka cunaqabateysay cunnada deeqda ah. Dowlada Ingiriiska sidaas oo ay tahay waxa ay kor usii qaaday deeqdii lasiinayay dowlada ethiopia 24 kororsi ayay dalacday iyada oo taasna kusii dartay in 290kii million ay horey usiin jirtay ethiopia ku kordhisay lacag kale oo lagu magacaabo gargaarka dag daga ah oo qiimihiisu yahay 48 million.
Wargeyska Telegraph oo isna si kulul u qoray caawimada lasiiyo Ethiopia iyo sida loo isticmaalo ayaa soo bandhigay warbixino si qarsoodi ah uga soo baxay European Uninonka. wargeyska ayaa soo bandhigay E-mailo ay 60 safiir oo ka tirsan wadamada ree Europe oo fadhigoodu yahay caasimada Adis Ababa ee Ethiopia usoo direen midwoga Europe. Emailadaas ayaa kawaramayay in lacagta deeqda ah ay dolwada ethiopia si qaldan u maamusho. Wargeyska ayaa sheegay in dhamaan warbixinadaas ay indhaha ka daboosheen wadamada ree Galbeedku islamarkaasna ay ku abaal mariyeen dowlada Ethiopia in loo sii kordhiyo deeqda lasiinayo.
Wargeyska ayaa waxa uu baadhitaan ku soo saaray in wadamada ree galbkeedu khaastaan Midowga Europe sida ay uga gaabsadeen inay canbaareeyaan gabood fallada ay dowlada Ethiopia u gaysato shacabka Ethiopia iyaga oo ku doorsaday inaysan canbaareyn doorashadii 2005 ka dhacday Ethiopia iyaga ku badashay in isbadalka Cimilida uu Meles zenawi Afrika ugu matalo si Codka taagerada Europe uga hesho Africa shirkii 2009 ee cimilada Adduunka.
Emailada soo fakaday ee wargeysku soo saaray ayaa Safiirada ree Europe ee kusugan Addis Ababa waxay u soo direen Xarunta Brussel. Waxaana ku qorna in dowlada Ethiopia si joogta ah maalin kasta ay ugu xad gudubto waxyaalaha aasaaska u ah xuquuqda Aadamaha sidaas darteedna midowga Europe uu jawaab dag dag ag oo adag ugu jawaabo Ethiopia si looga hortago.
Anna Gomez oo ah xubin Baarlaamka EU, islamarkaasna aheyd gudoomiyaha Kormeerka dooroshadi 2005 Ethiopia ayaa ku eedeysay Wadamada Europe, inay dowlada Ethiopia ku taageeraan gabood fallada ay geystaan iyaga oo lacag ku harqiya sida dhibicda roobka oo kale. Anna Gomes ayaa waxa ay tiri waxa ka danbeeya in Ethiopia aan ladaba galin wadamada Europe oo dhan si gaar ahaaneyd Ingiriiska iyo Germanka kuwaas oo ka hortaagan Brussel inay talaabo ka qaado Ethiopia islamarkaasna raba in ganacsigoodi sidii hore ugu socdo waayo ayay tiri dano gaar ahaaneyd ayay ku qabaan dowlada Ethiopia.
Afahayeen u qaabilsan Midowga Europe xidhiidhka diplomacyga oo jawaab bixinaya ayaa waxa uu yiri, ilaalinta xuquuqda aadamaha waa qodobka ugu horreeya ee mudnaanta u leh midowga Europe een aan cidkasta kalaxaajoono ee ka baxsan midowga Europe, dowlada ethiopiana waxa ay soo hoos galaysa wada xaajoodkaas markasta waan u soo bandhigna kalana hadalna arrimaha xuquuqul insaanka.
Sidoo kale Dowlada Ingiriiska ayaa jawaab kasoo saartay eedeymaha caddeynta leh ee lagu soo bandhigay filimka 12 daqiiqo soconaya ee laga soo duubay gudaha Ethiopia sida qarsoon. Waxayna dowlada ingiriisku sheegtay inay si taxadar leh u qaadanayaan wax kasta oo eedeyn ah oo ku aadan mucaawamada lasiiyo Ethiopia islamarkaasna si dhaqso leh talaabo ku habboon ay u qaadan doonaan.
Warbixintan ay soo saartay BBC news night ayaa waxa uu kusoo hagaagay waqti geeska Afrika ay ka jiraan abbaari kulul oo saameyay malaayin dad ah. Sidoo kale waxa uu kusoo beegmay waqti dowlada USA iyo Ingiriisku ay ku jiraan khasaare dhinaca dhaqaalaha ah oo ay ka jarayaan mushaharadii dadkii shaqeynayay islamarkaasna ay jirto shaqo la’aan hadheysay.
Faysal jigjiga says:
Ilaahbaa wayn ninkii,aamina ayaa awoodleh, umadda ree ogadenia way umidaysanyihin, kuwan deqda bixiya iyo kuwan lasinayaba marka waxana waa ,= Qawda maqashii waxna ha,uqabanin,, sxb dhammantiin iskaashada umadan go,aankedu waa geeri ama gobanimo thanks All of u. By